Kutheni le nto ungafanele uphinde uthenge iWebhusayithi eNtsha kwakhona Martech Zone
Oku kuya kuba ngumsindo. Ayipheli iveki ndingenazo iinkampani zindibuza ukuba sibiza malini nge website entsha. Umbuzo ngokwawo uphakamisa iflegi ebomvu ebomvu ethetha ukuba yinkcitha xesha lokuba ndibalandele njengomthengi. Ngoba? Kungenxa yokuba bajonge iwebhusayithi njengeprojekthi emileyo enesiqalo kunye nendawo yokuphela. Hayi… sisixhobo esiphakathi ekufuneka silungiselelwe rhoqo kwaye silungelelaniswe.
Amathemba akho aNgaphaya kweWebhusayithi yakho
Masiqale ngesizathu sokuba unayo iwebhusayithi ukuqala. Indawo yewebhu yinxalenye ebalulekileyo yakho ubukho bedijithali ngokubanzi apho igama lakho lakhiwe khona kwaye unokubonelela ngolwazi olufunekayo kakhulu kubaxhasi abanokubakho. Ngalo naliphi na ishishini, ubukho babo bedijithali ayisiyiyo iwebhusayithi yabo kuphela ... ibandakanya:
Iindawo zolawulo -Ngaba ziyavela kwiziza apho abantu bafuna imveliso okanye inkonzo? Mhlawumbi yiAngi, Yelp, okanye ezinye iirejista ezisemgangathweni.
Ukulinganisa kunye neeNdawo zokuHlola -Kunye nemikhombandlela, ngaba ziyavela kwiindawo zokuphononongwa kwaye ngaba balawula olo dumo kakuhle? Ngaba bacela uphononongo, bayaphendula, kwaye balungisa uphononongo olubi?
YouTube - Ngaba banazo iividiyo kwiYouTube ezijolise kwimarike nakwimizi-mveliso yabo? I-YouTube yeyona injini yesibini yokukhangela kunye nevidiyo kwindawo ebalulekileyo.
Iindawo zokuchaphazela -Zikhona iisayithi ezinempembelelo kunye nobuntu obunabalandeli abanzi ababelweyo? Ngaba uzabalazela ukwamkelwa kwezi ndawo?
Iinjongo zophando -Abathengi bajonge kulwazi kwi-intanethi ukubanceda kwinkqubo yabo yokwenza izigqibo. Ngaba ukhona apho bajonge khona? Ngaba unayo ilayibrari yomxholo loo nto ihlala ihlaziyiwe?
Imidiya yokuncokola -Abathengi bajonge imibutho ekwi-intanethi ebonelela ngexabiso eliqhubekayo kunye nokuphendula kubathengi. Ngaba uyabanceda abantu kumajelo asekuhlaleni nakumaqela akwi-Intanethi?
email Marketing -Uphuhlisa uhambo, iincwadana ezinolwazi, kunye neminye imithombo yeendaba yonxibelelwano ephumayo enceda abathengi ukuba bafumane uhambo?
Advertising -Ukuqonda ukuba ungakanani umzamo kunye nohlahlo-lwabiwo mali ekufuneka lusetyenziselwe ukufumana izikhokelo ezitsha kwi-intanethi akufuneki kuhoywe.
Ukulungelelanisa ubukho bakho bedijithali kuwo onke amajelo kunye nejelo kuyinto eyimfuneko kule mihla kwaye ingaphaya kokwakha nje kwiwebhusayithi entsha.
Indawo yakho yeWebhusayithi ayifanele ibe Zenziwa
Indawo yakho yewebhusayithi ayisoze Zenziwe. Ngoba? Ngenxa yokuba ishishini osebenza kulo liyaqhubeka ukutshintsha. Ukuba newebhusayithi kufana nokuba nenqanawa ohamba ngayo emanzini avulekileyo. Kuya kufuneka uhlale uhlengahlengisa iimeko-nokuba ngaba kukhuphiswano, abathengi, ubuchule bokukhangela kwi-injini, ubuchwepheshe obuvelayo, okanye iimveliso kunye neenkonzo zakho ezintsha. Kuya kufuneka uqhubeke uhlengahlengisa ukukhangela kwakho ukuze uphumelele ekutsaleni, ekwaziseni nasekuguqulweni kweendwendwe.
Ngaba ufuna esinye isifaniso? Kufana nokubuza umntu,Kubiza malini ukuba sempilweni?”Ukufumana impilo esempilweni kufuna ukutya okusempilweni, ukuzilolonga, kunye nokwakha umfutho ekuhambeni kwexesha. Ngamanye amaxesha kubakho iingxaki ngenxa yokulimala. Ngamanye amaxesha kukho izifo. Kodwa ukuba sempilweni akunaso isiphelo, kufuna ukugcinwa okuqhubekayo kunye nohlengahlengiso njengoko sikhula.
Kukho utshintsho oluninzi olufuna ukulinganiswa rhoqo, ukuhlalutya, kunye nokwenziwa kwiwebhusayithi yakho:
Uhlalutyo loKhuphiswano -Uhlengahlengiso kunye nokwenza ngcono ukuzehlula kukhuphiswano lwakho. Njengoko bavelisa izibonelelo, babelana ngokwabelana, kwaye bahlengahlengisa imveliso kunye nenkonzo yabo, kakhulu.
Ukuguqulwa kokutshintsha - Ngaba imeko yakho yokuqokelela isikhokelo okanye abathengi bayanda okanye bayancipha? Ukwenza njani kube lula? Ngaba unayo ingxoxo? Cofa ukuze ubize umnxeba? Iifom ekulula ukuzisebenzisa?
Iiteknoloji ezihlumayo - njengoko ubuchwepheshe obutsha bulindelekile, ngaba uyabusebenzisa? Umtyeleli wewebhusayithi yanamhlanje unolindelo olwahluke mpela, efuna ukuzenzela. Omnye umzekelo olungileyo kukucwangciswa kokuqeshwa.
Inkqubela phambili yoyilo Ububanzi bebhendi, izixhobo, ubungakanani bescreen… itekhnoloji iyaqhubeka ukuqhubela phambili kunye nokuyila amava omsebenzisi alungiselela olu tshintsho lufuna utshintsho rhoqo.
UkuSebenza kweeNjini zoPhando - iirejista, iisayithi zolwazi, upapasho, iisayithi zeendaba, kunye nabantu abakhuphisana nabo bonke bazama ukukubetha kwiinjini zokukhangela kuba abo basebenzisi banenjongo enkulu yokuthenga. Ukubeka iliso kwizinga lamagama aphambili kunye nokwenza umxholo wakho kubaluleke kakhulu ekugcineni phezulu kwesi sixhobo siphambili.
Nokuba yeyiphi na iarhente yentengiso okanye ingcali oyiqeshileyo kufuneka ukuba uyiqonde kakuhle ishishini lakho, ukhuphiswano lwakho, umahluko wakho, iimveliso zakho kunye neenkonzo, uphawu lwakho, kunye nesicwangciso sakho sonxibelelwano. Akufuneki bahlekise uyilo kwaye ke amaxabiso aphumeze uyilo. Ukuba kuko konke abakwenzayo, kuya kufuneka ufumane iqabane elitsha lokuthengisa oza kusebenza nalo.
Gcina imali kwiNkqubo yokuThengisa ngeDijithali, hayi iProjekthi
Indawo yakho yewebhusayithi indibanisela yetekhnoloji, uyilo, ukufuduka, ukudityaniswa, kwaye-ewe umxholo wakho. Umhla wakho website entsha Ukuphila ayisiyiyo isiphelo seprojekthi yakho yentengiso yedijithali, ngokoqobo lusuku lwe-1 lokwakha ubukho bentengiso yedijithali. Kuya kufuneka ukuba usebenzisane neqabane elikuncedayo ukuba uchonge isicwangciso esipheleleyo sokuhambisa, ukubeka phambili inqanaba ngalinye, kunye nokunceda ukwenza oko.
Nokuba yiphulo lokwazisa, ukuphuhlisa isicwangciso sevidiyo, ukwenza imephu kwiihambo zabathengi, okanye ukuyila iphepha lokufika… kuya kufuneka utyale imali kwiqabane eliqondayo ukuba yonke into isebenza njani. Ingcebiso yam iya kuba kukuphosa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwewebhusayithi kwaye, endaweni yoko, ukumisela utyalo-mali onqwenela ukulwenza inyanga nenyanga ukuze uqhubeke nokwenza isicwangciso sakho sentengiso yedijithali.
Ewe ukwakha i website entsha inokuba yinxalenye yeso sicwangciso sipheleleyo, kodwa yinkqubo yokuphucula eqhubekayo… ayisiyiyo projekthi ekufuneka igqityiwe.
tags: Nkonzoukuphucula okuqhubekayoukuguqulwa kokusebenzaIwebhusayithi entshaUhlahlo-lwabiwo mali lwewebhusayithiIindleko zewebhusayithikwiwebhusayithi